Semalt विशेषज्ञ रूपान्तरण, यातायात, र वेबसाइट प्रदर्शन बीच जडान निर्दिष्ट गर्दछ
सामग्री मार्केटिंग, SEO, र अन्य इनबाउन्ड रणनीतिहरूको लागि साइटमा कारकहरूसँग व्यवहार गर्ने क्रममा, हामी कसरी साइट प्रदर्शनले यातायात र रूपान्तरणहरूलाई असर गर्छ भनेर बुझ्न असफल हुन्छौं। धेरै जसो केसहरूमा व्यक्तिहरू संरचनात्मक र सौन्दर्य तत्वहरूमा मात्र ध्यान दिन्छन्। वेबसाइटको संरचनात्मक तत्त्वहरूले तपाइँको साइटको HTML कोडमा शीर्षक ट्यागहरू र मेटा ट्यागहरू जस्ता वस्तुहरू समावेश गर्दछ। अर्कोतर्फ, सौंदर्य तत्वहरूले कारकहरू सन्दर्भ गर्दछ जस्तै वेब डिजाइन तत्त्वहरू, कुञ्जी शब्द चयन, र सामग्री विकल्पहरू। यी वेबसाइटहरूको अधिकतम तपाईंको वेबसाइटको अप्टिमाइजेशनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकाको रूपमा यस इक्वेसनमा अझ धेरै कुरा छ। अन्य कारकहरूले यस प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् साइटको अपरेशन समावेश हुन सक्छ। वेबसाइटको कामकाजमा, वेबसाइट प्रदर्शन एक कारक हो जुन तपाईंले विचार गर्नु आवश्यक पर्दछ।
वेबसाइट प्रदर्शन प्रयोगकर्ता द्वारा एक वेबसाइट को ब्राउजि experience अनुभवको अनुभव र प्रतिक्रिया हो। यो सर्वर गति, ट्राफिक, ब्यान्डविथ बाँडफाँड र कोड नै जस्ता मुद्दाहरूबाट प्रभावित हुन सक्छ। गति को लागी वेबसाइटहरु लाई अनुकूलन गर्दा, सानो आकार स्रोतहरु को उपयोग र मोबाइल पेज एकीकरण केहि महत्वपूर्ण कारकहरु हुन् जुन तपाईले आफ्नो साइटको लागि कारक बनाउन आवश्यक पर्दछ।
Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक रस बार्बर, वेबसाइट प्रदर्शन को केहि कारकहरु लाई परिभाषित गर्दछ जुन ट्राफिक र रूपान्तरण लाई असर गर्न सक्छ:
१. साइट अपटाइम
यो समय तपाईंको साइट प्रत्यक्ष छ। तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु लाई प्राप्त गर्न र प्रभाव पार्नको लागि तपाइँको वेबसाइट माथि हुनुपर्छ। व्यक्तिले एउटा पृष्ठ visiting०4 सन्देश सामना गर्नुपर्दा वेब पृष्ठमा हेरेर घृणा गर्दछ। जति धेरै त्रुटि तपाईंको रैंकमा असर गर्दैन, यसले ग्राहकको अनुभव र प्रतिक्रियालाई असर गर्छ। वेबसाइटहरू जो निश्चित समयमा बन्द हुन्छन् यसमा फिक्सको आवश्यक पर्दछ। एक 301 पुनर्निर्देशन एक द्रुत समाधान समाधान हुन सक्छ।
२. मोबाइल प्रदर्शन
मोबाइल उपकरणहरूमा तपाईंको वेबसाइटको प्रदर्शनले Google को "मोबाइलगेडन" अपडेट २०१ 2017 पछि रैंकिंगलाई प्रभाव पार्छ। धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू प्राय: साइटहरू पहुँच गर्न सेलफोनमा निर्भर छन्। तपाईंको वेब डिजाइन मापदण्डमा फोनमा प्रयोगकर्ताहरूका लागि मोबाइल मित्रवत साइट समावेश हुनुपर्दछ। गुगलले साईटहरूलाई मोबाइल पृष्ठ दृश्य बिना नै क्रमबद्ध मार्फत दण्ड दिन सक्दछ।
Site. साइट गति
तपाइँको वेबसाइटमा पृष्ठहरू लोड हुन यसले लिने समय रैंकिंग कारक हो। खोज ईन्जिनहरू समान पृष्ठको आधारमा वेबसाइटहरूलाई क्रमबद्ध गर्ने विधिको रूपमा "पृष्ठ लोड समय" मा निर्भर छन्। तपाई ब्यान्डविथ बाँडफाँड बढाउँदै वा छविमा र सानो आकारका साना फाइलहरू प्रयोग गरी समायोजन गरेर "साइट गति" वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ।
Content. सामग्री उपलब्धता
यो तपाइँको वेबसाइट को प्रत्येक पृष्ठ मा प्रत्येक जानकारी को आपूर्ति जाँच काउन्टर गर्न आवश्यक छ। छुटेका सामग्रीहरू जस्तै हराइरहेको छविहरूले तपाईंको क्रमलाई असर गर्दछ। कुनै हराएको सामग्री ठीक गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। मिडिया फाईलहरूको मामलाको लागि, साधारण 1०१ पुनःनिर्देशितले चीजहरूलाई अस्थायी रूपमा सच्याउन सक्छ, तर तपाईंलाई स्थायी समाधानको आवश्यक पर्दछ।
कुनै पनि अनलाइन खोज ईन्जिनमा र्याक प्राप्त गर्न वा ट्राफिक बढाउन वेबसाइट र सामग्री अनुकूलन गर्न आवश्यक पर्दछ। कुनै पनि इन्टरनेट मार्केटि strategy रणनीतिमा, अन्तिम उपभोक्ताको प्रभाव प्राय: प्राथमिक लक्ष्य हुन्छ। सर्फिंग वेब डिजाइन, विकास, र होस्टिंगमा साइटको अनुभव गर्ने तरिका र ब्राउजिंग अनुभवले एक व्यक्तिले आनन्द लिन्छ। जब वेबसाइट प्रदर्शनका यी पक्षहरू अनुकूलित हुन्छन्, खोजी क्रमबद्धता सुधार हुने सम्भावना हुन्छ, ट्राफिक बढ्नेछ, र अन्तमा, समीक्षामा ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया सकारात्मक हुनेछ जसले अन्तत: तपाईंको वेबसाइटमा रूपान्तरण बढाउँदछ। परिणामहरू परिवर्तन हुँदैन तुरून्त यी परिवर्तनहरू लागू हुन्छन्। यसको सट्टामा, तिनिहरु सुधार गर्न को लागी तपाईको साइट मा आवश्यक समायोजन गर्न को लागी।